Ikhadi leTarot likaHermit - Khetha Uphawu
Ikhadi leTarot likaHermit
Intsingiselo yeKhadi leTarot, uthando, ukubuyiselwa umva & Okuninzi x Ikhadi leTarot: UHermit
Amagama angundoqo: Inguqu, kude, Path komphefumlo, akhulelwe, Kubugqi
Isiqinisekiso: Amanxeba am nethunzi lindenza ndigqibelele.
I-Hermit idla ngokuxhunywa kwi-Mercury, iSaturn kunye nomqondiso we-Virgo, njengoko ithetha ngemiyalezo eziswa kwi-underworld, isizungu kunye nokungatshati, eyona ndawo imnyama yeentlango zoMphefumlo wethu. Kufuna ukuba wedwa kunye nokunyuka okuzolileyo ukuya kwiinjongo zethu, de sifike encotsheni yentaba apho sibona kwaye siqonde konke, kwaye sifumene uxolo kunye nemizabalazo yethu. Sekunjalo, akukho sizathu sokuzifihla kwindima yayo ebonwe ngePluto, njengoko kukuguquka apho sifunda ukuphilisa, ukuzixolela, ukukhupha ixesha elidlulileyo kunye nemilambo yethu yookhokho. Eli likhadi elibonisa ukuba kungakanani ukuzinyamekela kunye nokuphumla okufunekayo ukwenza amanyathelo anesibindi ukuya kwizinto esinqwenela ukuzifeza, kunye nomqondiso womzabalazo wangaphakathi oqhubekayo onokusombululwa kuphela yedwa kunye nobukho bukaThixo. Akukho mntu wumbi ubonwayo apha, ebonisa ukuba uxanduva lwethu olupheleleyo lweSiqu lusivumela ukuba sibone ukuba ngawaphi amanyathelo ekufuneka siwathabathe ukuze samkele konke kwaye siqonde isikhundla sethu sokwenyani sokuphumelela emhlabeni. Ukukhanya okuthwelwe apha kukukhanya kothando kunye nokukhanya kweetalente zoMphefumlo wethu kunye neemfuno, kwaye kunokutolikwa njengomntwana wangaphakathi ekufuneka sikhuseleke kwihlabathi langaphandle de sifike encotsheni yentaba esiya ngakuyo.
Akubonakali kuthembisa ukubona iHermit ekufundeni uthando, ikhadi lokuzihlukanisa kunye nokuba wedwa. Sekunjalo, akusayi kutshabalalisa ithuba lethu lokumanyana kwaye kuxhomekeke kwinqanaba lokuqonda kunye neendima ezithintekayo zemiphefumlo ebandakanyekayo, sinokubona ukuba ibonisa ukubaluleka kwendawo kunye nemida kwikhonkco elivumela ukuba siqonde ukuba yintoni na. sifuna ngokwenene umntu emi phambi kwethu. Likhadi leenjongo eziphakamileyo kunye nolangazelelo olufuna omnye umvandedwa ukuba ame ngokuchasene nathi, ukuze sinxibelelane kumanqanaba afanayo okukhula ngokomoya okanye sinokutsalwa ziimvakalelo ezisindwayo nezizezookhokho bethu ngokwenene. Likhadi lenyaniso ekhohlakeleyo efunekayo ukudibanisa, kwaye inokukhokelela ekukhawulweni kobomi obutsha ukuba ilawulwa ngokunyaniseka okucocekileyo kunye nokuzinikela ekukhuleni komntu ngamnye ozimeleyo.
Eli khadi luphawu oluhle lokufunda ikhondo lomsebenzi, elibonisa ukuzinikela kwiinjongo kunye nokuzibophelela kwexesha elide esinokunyamezela de sifikelele kwisimo kunye nezinto esizifezayo. Isikhumbuza ngexabiso lokuZiqu kwiqela, kwaye ibonisa ukuba kufuneka sithathe uxanduva lwethu lobuqu kuqala ngaphambi kokuba siqhagamshelane nawo nawaphi na amalungu eqela okanye abanye abantu kwiofisi yethu. Oku kubonisa indlela yobuchwephesha ekunxibelelaneni nendalo, imijikelo yobomi, yokuzalwa nokufa, kunye neenzame ezinobungozi ezizimeleyo ezizisa iziphumo ezimangalisayo kuphando kunye nokukhula kwengqondo ehlangeneyo. Kukhetho lomsebenzi, eli likhadi lokunyanga apho amanxeba ethu ephilisa amanxeba abanye njengoko sifunda ukuziphilisa. Ngumsebenzi onamandla walo naluphi na uhlobo, ukuphilisa ngezandla, i-shamanism kunye nokusetyenziswa kwezikhokelo zezilwanyana ukubonisa abanye indlela.
Amandla okuphilisa iHermit abonakala ngokucacileyo elukholweni, ulwazi olufihlakeleyo kunye nexabiso lehlabathi lethu elingaphantsi. Likhadi elibonisa ukuba sifuna ukuphumla kunye nokuba sodwa ukuze sifumane iimpendulo ngokucamngca okanye ebuthongweni, kunye nenye yokubonisa ukuba ukusebenzisana nehlabathi langaphandle kunokusiphazamisa ekunyangeni. Ikwasisalathiso sokuba izisombululo kuyo nayiphi na imeko yefiziyoloji enokubakho ziya kufumaneka kolunye ukhetho, ngaphandle kwezigqibo zezonyango kunye neengcebiso. Ibonisa indlela umzimba wethu onamandla kunye neenkqubo ezichaphazela ngayo ihlabathi lethu lezempilo elingazi nto kwaye lisikhomba ukuba sikhawuleze, sihlise isantya, siphefumle kwaye siphumle, de senze ibhalansi ngaphakathi ukuze imizimba yethu ikwazi ukuchacha kwaye uzive ulungile.
Isikhundla esijikiweyo seHermit sinokubonisa ukuba izinto esizifezileyo kunye nezinto esizinqwenelayo zisisiphumo soloyiko olungekho zingqondweni. Kusisimo esikhohlisayo ukuba sibe nako ekufundeni kwethu, kuba sijongene nembopheleleko yokwenene yentliziyo xa sizama ukulandela iindlela ezisengqiqweni nezibambekayo zobomi. Ibonisa isidingo sokunxibelelana nelizwe lethu leemvakalelo kunokuba sisukele nje iinjongo ezingahambelaniyo nondoqo wethu, kwaye kunokubonisa ukuba sichithe ixesha elininzi kwiimfazwe zabanye abantu okanye sizifihle kubumnyama bethu. kunye nezithunzi zangaphakathi. Isibizela ekubeni sizinikele kwinyaniso esezintliziyweni zethu, singene nzulu ukuze ingqondo yethu ive ngenene ulwazi lufikelela kuyo. Kwelinye icala, inokuba sisalatha sokuba siye sancama uvuyo ngokuvumela iimvakalelo ezingakhiyo nobulolo busichaze xa ilixesha lokujongana nehlabathi kwaye siphume kwiqokobhe lethu.
Umgca wexesha leHermit
Ixesha elidlulileyo - Xa ibekwe kufundo lwexesha lethu elidlulileyo, iHermit ibonisa indlela ixesha lethu esilichithe kwiintlungu, ukuba sodwa, okanye nkqu nomonzakalo wasomeleza kwaye wasikhokelela kulwazi olutsha esinokuziva singenamava kangako ukulusebenzisa. Lutshintsho olunzulu lwehlabathi langaphakathi apho sasijongene needemon zethu kunye namacala amnyama obomi ukuze sikhule, kwaye ibonisa indlela ekwakufuneka senze ngayo imida kunye neendonga ezibhekiselele kwabanye ukuze ziphilise kwaye sifunde ukuze siqhubele phambili ngokukhanya okwahlukileyo, ngokwenyani kumbindi wobuntu bethu.
Nikela - Ukubonisa ukukwazi kwethu ngoku ukumba nayiphi na inyaniso emi kwindlela yenkqubela phambili, eli khadi lijika izicelo zethu ngaphakathi kwaye lisinika amandla okunyamezela kwiimfazwe zangaphakathi zexesha elide de kufumaneke izisombululo. Kusikhumbuza ukuba sichithe ixesha elaneleyo lodwa, ngokuqhagamshelana neNdalo, iMimoya yethu kunye noThixo wethu, kwaye isinika impendulo ngolwazi esinokulufumana ngaphakathi ukuba siyeka ukukhangela iimpendulo kwabanye abantu nakwihlabathi langaphandle. Olona tshintsho lokwenene ebomini, luthetha ngokukulungela kwethu ukufumana inyaniso yokwenene ngaphandle kwakhe nawuphi na omnye umntu nempembelelo esecaleni, ngoxa sisasebenzisa uqhagamshelwano ngalunye ukuze sikhule.
Ikamva - Xa iqhagamshelwe kwikamva, iHermit ibonisa indlela ebaluleke ngayo indlela yethu kwezi ntsuku, iiveki okanye iinyanga ezilandelayo, kwaye kufuneka siyijonge njani ngokuzinikela kwaye sigxile kwiSiqu. Ukuqulunqa into entsha kwaye sifezekise iinjongo esinqwenela ukuzenza, kuya kufuneka sehle kwindlela eyedwa ekungeyomfuneko ukuba imele ukuba sedwa ekudibaneni kwethu nabanye abantu, kanye njengokuba ukuzinikela kwethu kwinjongo zangaphakathi ezingenazo. nantoni na enokwenza nehlabathi langaphandle. Kufuneka sibambelele kwezona nkolelo zinzulu zisezintliziyweni zethu, kungakhathaliseki ukuba yintoni na enokwenziwa okanye ethethwa ngabanye.
Ukuhamba ngeendima ezahlukeneyo zesimboli esifanayo, eli khadi libonakaliswe ukuba limele uCronus, uShaman kunye nendoda endala ephethe iSibane senyaniso. Kungakhathaliseki ukuba yintoni na isibonakaliso, yayihlala iphethe inqaku lomoya elizisa uqhagamshelwano kunye neNdalo ngokuzimeleyo kunye nokuhlukana nehlabathi, ngenxa yezizathu zonqulo okanye zomoya xa iimpendulo kufuneka zifumaneke kwezinye iindawo zobomi kunezo zifumaneka ekuqondeni kwabantu okuhlangeneyo.
Isagittarius Aries Iiary Pisces I-Scorpio